Rehefa nianjera avy teny amin'ny solaitr'i Hawaii (Etazonia) i Doug Falter, mpitsangantsangana amerikana tia onja lehibe, dia tsy azony an-tsaina hoe hiakatra ho any Filipina, 8.000 km mahery miala azy io. Roa taona mahery taty aoriana ...
Fahatokisana: misotro ranon'omby isan'andro aho
Fahatokisan-tena: misotro ranon'omby isan'andro aho Ilay mpilalao sarimihetsika malaza any Bollywood dia gaga tamin'ny mpankafy azy tamin'ny filazany tamin'izy ireo fa misotro "urin'omby isan'andro" izy. Raha heverinao fa fako biby ...
Miseho amin'ny fanompoam-pivavahana ny mpivaro-tena ary manao fanambarana manaitra momba ny pastera
Mpivaro-tena tonga amin'ny fanompoana feno ary manao fanambarana manaitra momba ny pasitera Tapitra ny taona 2020 dia mbola tsy nahagaga antsika. Ny toe-javatra tsy azo ihodivirana indrindra amin'ny tsirairay dia amin'ity taona ity ihany ...
Fahatokisan-tena: nanankina 50 tapitrisa tamin'ny fofombadiko aho alohan'ny diako nandritry ny herinandro nefa eto…
Fahatokisana: Nanankina 50 tapitrisa tamin'ny fofombadiko aho alohan'ny diako nandritra ny herinandro nefa ity ny fahagagana amin'ny fiverenako. Prince no anarako ary mpandraharaha aho. Mipetraka miaraka amin'ny fofom-badiko sy ny zanakay vavy 6 taona aho. I ...
Fahatokisan-tena: Te hisaraka aho, ny vadiko mikapoka ahy tsy misy vidiny, fa tsy nety izy
Fahatokisana: Te hisaraka aho, ny vadiko daroka ahy tsy misy antony, nefa tsy tiany Ity tantara hotantaraiko anao ity dia ampahany mampanaintaina amin'ny fiainako. Williams D.Ny anarako dia efapolo taona aho ary ...
Fahatokisana: Nanaiky handeha ho any amin'ny toerany aho, nefa tsy nieritreritra hoe hifarana toy izany
Fahatokisana: Nanaiky handeha ho any amin'ny toerany aho, nefa tsy nieritreritra fa hijanona ho toy izao ny anarako Elizabeth ary tena zava-nitranga teo amin'ny fiainana izany nitranga tamiko izany. Tsy hiteny ny anarako sy ny tena anaran'ny olona aho ...
ny lehilahy "ratsy indrindra" dia manambady ny vadiny faha-3 (sary)
Lehilahy 'ugliest' dia nanambady ny vadiny faha-3 (sary) Godfrey Baguma, ilay Comedianina mpanao hatsikana izay satro-boninahitra lehilahy ratsy fanahy indrindra any Oganda, vao nanambady ny vadiny fahatelo. Ny mpampakatra dia natambatra tamin'ny fatorana masina amin'ny fanambadiana sy ...
Nokapohina izy satria natory tamin'ny vadin'ny lehibeny (Lahatsary)
Voadaroka natory tamin'ny vadin'ny lehibeny (Lahatsary) Zimbaboeana iray no nahazo fanitsiana tamin'ny fiainany rehefa tratra niaraka tamin'ny vadin'ny lehibeny. Nahavita nitsoaka an-tsehatra ilay vehivavy raha ny ...
Lehilahy iray nanosika ny mpiara-miasa aminy 48 taona avy any amin'ny rihana faha-7
Lehilahy iray nanosika ny mpiara-miasa aminy 48 taona avy amin'ny rihana faha-7 Nosamborina ny alatsinainy teo, dia naiditra hopitaly ara-tsaina ny ampitson'io. Lehilahy iray ahiahiana ho nanala baraka ny namany 48 taona, izay maty, avy any amin'ny rihana faha-7 an'ny ...
Skotlandy: zanak'ondry iray amidy 400.000 euros!
zanak'ondry dia amidy 367.000 pounds, na mihoatra ny 400.000 euro, ny alakamisy teo tamin'ny lavanty tao Lanark (Scotland), hoy ny tatitra navoakan'i Capital. Nomena Double Diamond, ilay biby dia karazana Texel avy any Netherlands, saingy ...